Qoor-Qoor ayaa gaarey furuumaha dagaalka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor ayaa gaarey furuumaha dagaalka Mudug
Waxaa degaanka Qaycad Saakay la wareegay Ciidanka Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
GAALKACYO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye "Qoor-Qoor", ayaa Maanta booqday furuumaha dagaalka ee gobolka Mudug, halkaasoo ay Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudud maalmihii lasoo dhaafay kula dagaalamayeen Kooxda Al-Shabaab.
Wuxuu safar dhanka dhulka ah uga soo tagey Gaalkacyo, isagoo gaarey degaanka Qaycad, oo saakay Ciidamada la wareegeen, wuxuuna la kulmay mas'uuliyiin horkacaya dagaalka, oo ay kamid yihiin Cabdiweybdiid, Axmed Maclin Fiqi, Saadaq Joon iyo Jeneel Biixi, taliyaha Ciidanka dhulka DF.
Socdaalka Qoor-Qoor ayaa ah mid uu ku dhiiragelinayo Ciidanada dagaalka ku jira, oo uu kula dardaarmay inay Kooxda Al-Shabaab ka saaraan dhamaan degaanada ay uga sugan yihiin Koonfurta Mudug, si shacabka uga nabad-galaan dhibaatadii lagu hayay.
Al-Shabaab ayaa laga saarey dhowrkii maalmoood ee ugu dambeeyay Bacaadweyne, Camaara iyo Qaycad, waxayna Saraakiisha Ciidanka sheegeen inay sii wadayaan dagaalka inta dhamaanka gobolka xor ka noqonayo.
Wuxuu kusoo aadayaa dagaalka xili doorasho, oo la filayo in Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb lagu soo xulo Xildhibaanada Baarlamaanka, iyadoo hadii aan Al-Shabaab laga saarin degaanada ay joogto adkaanayso in la helo oday dhaqameed wax doorta.